ဦးထင်လင်းဦး ဟောပြောချက် NLD နဲ့ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်
Photo:Htin Lwin Oo
စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦးရဲ့ စာပေဟောပြော ပွဲ ဟောပြောချက်တွေဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ သဘောထား မဟုတ်ကြောင်း NLD ဗဟိုဌာနချုပ်က ဒီနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက် ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ သုံးပန်လှ စံပြကျေးရွာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီဟောပြောပွဲမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၊ လူမျိုးနဲ့ အယူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကို ထည့်သွင်းဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုဟောပြောချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုး၊ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က ကန့်ကွက်တယ်ဆိုပြီး ကြေညာချက်ထုြတ်ပန်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမည်ကိုပါ ဆွဲထည့် တာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို ကြေညာချက်ထုတ်ရ တာ ဖြစ်တယ်လို့ NLD ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးထွန်းထွန်းဟိန်က ပြောပါတယ်။
"စာပေဟောပြောပွဲတွေဆိုတဲ့ကိစ္စက သူတို့သီးသန့်ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာများကိုပေါ့နော် သူတို့သီးသန့် ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ ဟောပြောကြတယ်၊အဲ့ဒီလို ဟောပြောကြရာကနေပြီးတော့မှ ဒီလိုဟောပြောတဲ့ စာရေးဆရာနဲ့ အတိုက်အခံတစ်ဦးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ NLD ကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်တာ ကျနော် တို့က ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် ဘုန်းကြီးတွေက ဆရာထင်လင်းဦးပြောခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆန္ဒပြမယ်လို့ သူတို့ကြားတယ်လို့ သူတို့သတင်းရလို့ ကျနော်တို့ကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ် ခဲခဲယဉ်း ယဉ်းမဖြစ်အောင်ဖြစ်လုပ်တာ ချောင်းဦးမှာဟောပြောပွဲကို ဖိတ်တုန်းကလည်း ဒါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် ကျနော်တို့သိတာမဟုတ်ပါဘူး"
အဲ့ဒီဟောပြောတဲ့ စီဒီခွေတွေကိုလည်း လိုက်လံဖြန့်ချီနေတာတွေ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦးဟာ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမည်နဲ့ စာပေရေးသားတာတွေ၊ ဟောပြောတာတွေ မပြုလုပ်ဖို့ ယာယီ ကန့်သတ်တားမြစ်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Wise men and civilized people never talk about like that! NLD should be careful. Don't against the people. Without supporting of people, NLD never succeeds its goal. Please respect the people, including Monks; please reorganize the people and Monks for 2015 Myanmar election!
Nov 18, 2014 01:15 PM